Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) Vagadziri & Vatengesi - China Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) Factory
DAM1L Series Pasi Leakage dziviriro Dunhu Rinopwanya (ELCB)
DAM1L nhepfenyuro inosara yazvino (leakage) redunhu mudariki (inozotevera kunzi wedunhu mudariki) iri nyowani nhevedzano yeakasara azvino (leakage) akabudirira kugadzirwa nekushandisa kwepasi rose dhizaini dhizaini uye yepamusoro yekugadzira tekinoroji.
Yakachengetedzwa yakaumbwa kesi mhando redunhu mudariki.
Iyo yakatemwa kuputira voltage yematunhu mabhureki eiyi nhepfenyuro ndeye 400V (Inm iri pasi pe160A) uye 690V (Inm inodarika 250A), iyo inonyanya kushandiswa kweac 50Hz uye yakarongwa Mune yesimba rekuparadzira network ine yazvino ye10A ~ 500A uye yakatemwa inoshanda voltage ye380V / 400V, inoshandiswa kugovera simba remagetsi uye kuchengetedza kuwandisa uye pfupi dunhu remitsara nemidziyo yemagetsi.
DAM1L-125 CBR ELCB Pasi Rinobuda Dziviriro Dunhu Rinopwanya
Pasi pemamiriro ezvinhu akajairwa, Inogona zvakare kushandiswa kushomeka kwakawanda kwemitsara.
DAM1L-250 CBR ELCB Pasi Rinobuda Dziviriro Dunhu Rinopwanya
DAM1L nhepfenyuro inosara yazvino (leakage) redunhu mudariki (inozonzi seyedunhu mudariki) iri nyowani nhevedzano yezvakasara zvazvino (leakage) zvinobudirira kugadzirwa nekushandisa kwepasi rose dhizaini uye epamberi yekugadzira tekinoroji.
DAM1L-630 CBR ELCB Pasi Rinobuda Dziviriro Dunhu Rinopwanya
Nhanganyaya DAM1L nhepfenyuro inosara yazvino (leakage) redunhu mudariki (inozotumidzwa kunzi redunhu mudariki) iri nyowani nhevedzano yeakasara azvino (leakage) akabudirira kugadziridzwa achishandisa epasi rose standard dhizaini uye epamberi yekugadzira tekinoroji. Yakachengetedzwa yakaumbwa kesi mhando redunhu mudariki. Iyo yakatemwa kuputira voltage yematunhu mabhureki eiyi nhepfenyuro ndeye 400V (Inm iri pasi pe160A) uye 690V (Inm inodarika 250A), iyo inonyanya kushandiswa kweac 50Hz uye yakarongwa Mune simba rekugovera ...
DAM1 -160L ELCB Pasi Leakage dziviriro redunhu mudariki1
Iyo yakatemwa kuputira voltage yematunhu mabhureki eiyi nhepfenyuro ndeye 400V (Inm iri pasi pe160A) uye 690V (Inm inodarika 250A), iyo inonyanya kushandiswa kweac 50Hz uye yakarongwa Mune yesimba rekuparadzira network ine yazvino ye10A ~ 500A uye yakatemwa inoshanda voltage ye380V / 400V, inoshandiswa kugovera simba remagetsi uye kuchengetedza kuwandisa uye pfupi dunhu remitsara nemidziyo yemagetsi.Pasi pemamiriro ezvinhu akajairwa, Inogona zvakare kushandiswa kushomeka kwakawanda kwemitsara.